Otú nyefee Music si iPhone ka Mac & si Mac ka iPhone
Otú nyefee Music si iPhone ka Mac na site na Mac ka iPhone
Isiokwu a na-elekwasị anya ngwọta na-otú nyefee music si iPhone ka Mac na otú tinye songs ka iPhone si Mac. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na-ebufe music n'etiti iPhone na Mac, chọta ihe ngwọta n'okpuru. Ọ bụrụ na ị na-amaghị ihe na-eme, biko ahapụ anyị a ozi na ikwu ebe. Ekele. Isiokwu a na-ekpuchi 3 akụkụ:
Part 1. Nyefee Music si iPhone ka Mac
Ngwọta 1. iTunes Ike Detuo Non-zụrụ Songs si iPhone ka Mac, Gbalịa TunesGo nyefee All Music si iPhone ka Mac
Ngwọta 2. Olee nyefee zụrụ Music si iPhone ka Mac
Part 2. Nyefee Music si Mac ka iPhone
Ngwọta 3. Olee na Tinye Music ka iPhone enweghị iTunes on Mac
Ngwọta 4. Olee ka mmekọrịta Music si Mac ka iPhone na iTunes
Ngwọta 5. Olee Ka izipu Music si Mac ka iPhone site Cloud Services
Part 3. Ajụjụ na Azịza
Ẹdọhọ & A. Ajụjụ na Azịza maka Nyefee Music n'etiti iPhone na Mac
Video Tutorial: otú nyefee Music si iPhone ka Mac na site na Mac ka iPhone
Ngwọta 1. Nyefee Non-zụrụ music si iPhone ka Mac
Ị nwere ike adịghị adabere iTunes nyefee ndị na-abụghị zụrụ music, gụnyere songs dọwara si CD, ebudatara site na ngwa ma ọ bụ site weebụsaịtị na iPhone, si gị iPhone ka Mac n'ihi iTunes mgbe-enye gị ohere ime otú ahụ. iTunes Ike Detuo Non-zụrụ Songs si iPhone ka Mac. Ọ bụrụ na ị na-achọ a hassle free ụzọ nyefee ndị niile na-abụghị zụrụ songs ma ọ bụ ihe ọ bụla song si gị iPhone ka Mac, ị ga-agbalị a ngwá ọrụ ime otú ahụ. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ maka otú ka mmekọrịta music si iPhone ka Mac na Wondershare TunesGo (Mac). Ị nwere ike na-agbalị ya hụ otú ọ na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 1. gbanyụọ iTunes Auto mmekọrịta
Ihe mbụ mbụ, ẹkedori iTunes na pịa iTunes n'elu hapụrụ> Mmasị ... Na kpaliri window, pịa Devices taabụ. Na mgbe ahụ ego nhọrọ Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka. Mgbe nke a, gị iPhone gaghị ehichapu site iTunes.
Nzọụkwụ 2. Wụnye Wondershare TunesGo (Mac)
Tupu ịmalite edegharị music si iPhone ka Mac, download na wụnye Wondershare TunesGo (Mac) na gị Mac mbụ. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6. Na mgbe ahụ ẹkedori ya na jikọọ na gị iPhone na gị Mac site eriri USB. Mgbe ejikọta, ị ga-ahụ Wondershare TunesGo (Mac) anya dị ka ihe snapshot egosi.
Nzọụkwụ 3. Nyefee music si iPhone ka Mac
Ọtụtụ mmadụ na-agbalị ka mmekọrịta music si iPhone ka Mac. Ọ bụ irè. Otú ọ dị, agafere songs na-ejedebeghị iTunes ma ọ bụ Apple APP Store zụrụ songs. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ nke otú nyefee iTunes zụrụ songs si iPhone ka Mac
Ẹkedori iTunes na pịa iTunes menu nri n'akụkụ obere Apple na akara ngosi na rịbọn. Pịa Mmasị. Ọhụrụ window, pịa Devices. Na mgbe ahụ nne Mmetụta nhọrọ Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 2. ikike Your Mac na Apple ID
Pịa Store menu na iTunes ma họrọ ikikere nke a Computer. Itinye otu Apple ID nke na ị na-eji ịzụta songs na gị iPhone na ozugbo window.
Nzọụkwụ 3. Nyefee zụrụ Music si iPhone ka iTunes
Jikọọ gị iPhone na gị Mac. Wee pịa View> Gosi sidebar. Mgbe ị na-ahụ gị iPhone, Control pịa ya ikpughe ndọpụta ndepụta. Site ndepụta, họrọ Nyefee ịzụrụ.
Nyefee Music si iPhone ka Mac (Nzọụkwụ 1) Nyefee Music si iPhone ka Mac (Nzọụkwụ 2) Nyefee Music si iPhone ka Mac (Nzọụkwụ 3)
Ọ bụrụ na e a ịdọ aka ná ntị na-agwa gị na gị iPhone ga-ehichapu mgbe ị na-agbalị ka mmekọrịta music si iTunes ka iPhone on Mac, biko kwụsị syncing usoro ozugbo ma na-agbalị Wondershare TunesGo (Mac), nke na-enyere ị nyefee music si Mac ka iPhone enweghị iTunes. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu maka otú ime ya.
Wondershare TunesGo (Mac) - Nyefee Music ka iPhone enweghị syncing iTunes on Mac
Kpọmkwem mbubata music si Mac ka iPhone enweghị syncing iTunes;
Nyefee ọ bụla song ọ bụla na Mac ọ bụla iPhone enweghị ikpochapụ iPhone;
Ọ dịghị incompatibility ga-enwe nsogbu; Lelee akwado faịlụ formats >>
Akwado multiple iPhones, gụnyere iPhone 6s (Plus), iPhone 6, iPhone 5, na ndị ọzọ >>
Nzọụkwụ 1. gbanyụọ iTunes Automatic syncing
Na gị Mac, na-agba ọsọ iTunes. Pịa iTunes nke dị n'akụkụ aka nri nke Apple na akara ngosi na nnọọ n'elu aka ekpe. Họrọ Mmasị. Na window, chọta na pịa Devices pịa. Na mgbe ahụ ego "Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka."
Nzọụkwụ 2. Download Wondershare TunesGo (Mac)
Download na wụnye Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na iMac, MacBook Pro na MacBook Air na-agba ọsọ OS X 10,8, 10.9 (Mavericks), 10.7, na 10.6. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site na eriri USB. Ẹkedori Wondershare TuensGo (Mac), ị ga-ahụ isi window dị ka snapshot show n'akụkụ aka nri.
Nzọụkwụ 3. Download Music si Mac ka iPhone enweghị iTunes
Pịa Music na n'aka ekpe nke window ịbanye akara window. Si ebe a, ị pụrụ ịhụ niile songs na gị iPhone na-depụtara. Pịa triangle n'okpuru Add button n'elu. Na ndọpụta ndepụta, họrọ Tinye File ma ọ bụ Tinye nchekwa. Mgbe ahụ, a window ga-eduga gị Mac nchọgharị maka songs ma ọ bụ music collection nchekwa. Họrọ onye gị mkpa na pịa Open idetuo music si Mac ka iPhone.
Ọ bụrụ na gị iPhone e paired na gị Mac, i nwere ike iji iTunes na gị Mac ka mmekọrịta songs gị iPhone kpam kpam. Data na gị iPhone gaghị ida. Iji jiri iTunes ịkwaga songs si Mac ka iPhone, nweta nkwalite gị iTunes ka ọhụrụ version mbụ. Ị nwere ike ibudata ọhụrụ version si Apple ukara saịtị. Soro nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú.
Ẹkedori iTunes na gị Mac. Pịa iTunes File menu ke rịbọn ma họrọ Tinye File ka Library ịgbakwunye songs si mpaghara gị ike mbanye ka iTunes Library.
Pịa View menu na iTunes na họrọ Gosi sidebar. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site eriri USB. Mgbe ejikọrọ, ị pụrụ ịhụ gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ.
Pịa gị iPhone na sidebar. Pịa Music taabụ na n'akụkụ aka nri. Ego mmekọrịta Music. Ọzọ, ị kwesịrị họrọ songs na pịa Mee ịkwaga songs si Mac ka iPhone.
E wezụga iji iTunes na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ iji tinye music si Mac ka iPhone, ị ka nwere ike na-agbalị ígwé ojii ọrụ nyefee music si Mac ka iPhone. Ebe a bụ ụfọdụ ama ígwé ojii ọrụ nke ga-etinye gị na gị na ọma na-enwe music.
# 1. Google Play Music. Ejila m ezighị ezi. M na-adịghị n'igwa gị ka ị na ahụhụ music si na ya, ma na-agbalị ikwu ọ na-enye ọrụ maka gị bulite ruo 20000 songs si gị Mac ka ígwé ojii maka free. Ị nwere ike iwunye Music Player na gị Mac bulite songs mbụ. Ma wụnye Google Music ahịa - Melodies na gị iPhone na-egwu ndị a uploaded songs for free.
# 2. Dropbox. Dropbox dị ka a akpa na ígwé ojii na-enye gị ka ihe niile na ya, N'ezie, gụnyere songs. Ihe niile ị chọrọ bụ iji wụnye Dropbox on Mac na Dropbox maka iPhone. Mepụta akaụntụ ma na-etinye songs si gị Mac ka akpa. Mgbe e mesịrị, mmekọrịta Dropbox na-enwe music kpamkpam na gị iPhone.
# 3. VOX. Iji-eme ihe n'eziokwu, VOX ọrụ ọzọ dị ka a mgbasa ozi ọkpụkpọ, ma ọ enye gị ohere ka mmekọrịta music si gị Mac ka iPhone site na airplay. Ma na-agbaghara m, m ga-asị, ọ bụ n'ezie otu nnukwu music ngwa inyocha online redio ụgbọ. Na ị nwekwara ike iji ya na-egwu họrọ music si iTunes Library.
Part 6. Ajụjụ na Azịza maka Nyefee Music n'etiti iPhone na Mac
Ajụjụ # 1: m zụrụ a MacBook ma na-achọ ịma ma ọ bụrụ na m download m music si m iPhone 4s m MacBook, ọ ga-hichapụ ihe niile songs m iPhone na-kwalite na onye song m nwere na MacBook, ebe m iPhone isn 't synced na nke a MacBook?
Azịza: Akpa, m ga-asị na ị na-enweghị ike ibudata music si gị iPhone 4s gị MacBook gwụla ma ị ikike gị na kọmputa na Apple ID na ị na-eji ịzụta songs na gị iPhone na iTunes. Mgbe ahụ gbanyụọ akpaaka mmekọrịta iTunes mmasị maka ngwaọrụ. Mgbe e mesịrị, transfer zụrụ songs si gị iPhone gị MacBook. Iji nyefee abụghị iTunes zụrụ songs, na-ezo aka -lee nyefee niile songs si iPhone ka Mac. Na n'ihi na n'aka, ma ọ bụrụ na ị na nyefee zụrụ songs si gị iPhone ka Mac-enweghị syncing, songs na gị iPhone gaghị ehichapu ya.
Ajụjụ # 2: m abụọ Mac, ihe iMac na MacBook. M nnọọ ike na-m iPhone synced na ma abụọ Mac. Ọ na-aga ihichapu m iPhone. Dị ụzọ ọ bụla ka m tinye songs ka iPhone ọ bụla na nke Mac-enweghị iTunes?
Azịza: Nke a bụ otú iPhone e mere. Iji nyefee songs si Mac ka iPhone site iTunes, ị kwesịrị ị na gị atụnyere iPhone na Mac. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye songs ka iPhone on Mac-enweghị iTunes, ịmụta otú mbubata songs si Mac ka iPhone enweghị iTunes.
Ajụjụ # 3: All m music zụrụ jidesie m iPhone, m na-adịghị ihe mbụ kọmputa .... bụ n'ebe ụfọdụ ụzọ m nwere ike iṅomi ya anya m iphone ma ọ bụ ka m ga-ibudata niile music ọzọ site MacBook dị na ekwentị na MacBook na-eji otu iCloud ọrụ.
Azịza: N'ihi na nke a ọnọdụ, ọrụ na-adịghị mkpa ibudata niile music ọzọ site MacBook ma transfer zụrụ songs si iPhone ka Mac site iTunes.
Ajụjụ # 4: Olee otú m mmekọrịta m iPhone ka a ọhụrụ kọmputa na-enweghị ihichapu na mmekọrịta? M nwere ihe iPhone 4s na m na-eji ka mmekọrịta na m ochie windows kọmputa. M ugbu a nwere a MacBook ikuku na o doro anya na m chọrọ na-amalite syncing m iPhone na m Mac kama nke Windows PC. M chọrọ iji Mac iTunes maka syncing na-etinye music si Mac ka iPhone, ma anaghị m chọrọ atọpụ ọ bụla nke na music.
Azịza: Lee ndị abụọ ngwọta: syncing music si Mac iTunes ka iPhone na erasing mbụ data ma ọ bụ na-ebufe music si Mac ka iPhone enweghị iTunes. Nke ahụ bụ mfe azịza.
Nyefee Video si iPhone ka Mac
Copy Ndi ana-akpo si iPhone ka Mac
Mmekọrịta iPhone ka Mac
Nyefee Playlist si iPhone ka iTunes
Ndabere iPhone ka Mac na / enweghị iTunes
Jailbreak iPhone na Evasi0n 7
The Best iPhone nnyemaaka maka Ị
> Resource> Mac> otú nyefee Music si Mac ka iPhone & si iPhone ka Mac